IPhone 12 emfusa ngokuthengisa kwangaphambili ngoLwesihlanu | Ndisuka mac
Kumsitho wanamhlanje, sibona imibala emininzi kunye novuyo. Uhlobo lwentwasahlobo. Kwaye iApple iyasimangalisa ngentengiso evuyayo nenemibala. Entsha I-iPhone 12 emfusa kuthengiswa kwangaphambili ukusuka ngoLwesihlanu. Ngokuqinisekileyo ingxelo eyinyani yenjongo kunye nale modeli intsha.
U-Apple uye wothuka kulo msitho mtsha wasentwasahlobo. Ngelixa uTim Cook wayehambahamba ngeApple Park ngemibala yasentwasahlobo enemibala, kutyhilwe i-iPhone 12 emfusa entsha. uzokujoyina i-mini kunye ne-iPhone 12 kulwakhiwo ngoLwesihlanu, kunye Ukuhanjiswa kwee-odolo zokuqala ngo-Epreli 30.
Umbala omtsha igxininisa imiphetho yealuminiyam tyaba ye-iPhone 12, ezilungelelaniswe ngokugqibeleleyo nombala weglasi engasemva echanekileyo.
Zombini iimodeli, i-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 mini zezona zinto zilungileyo zethekhnoloji ye-Apple ngoku yeyona inesibindi kwaye kwangaxeshanye inemibala emihle endiyibonileyo, ubuncinci kwifowuni. Siza kuba nayo eyona teknoloji igqwesileyo eyona mibala mihle.
Kananjalo nendawo ebanzi Umboniso omkhulu weRetina XDR ngohlangothi kunye no-OLED ngamava okuqaqamba, okuntywilisela ngakumbi, kunye nekhava engaphambili yeCeramic Shield, ebonelela ngesiqwenga esikhulu sokuhlala somelele kwi-iPhone, sinesinye sezixhobo ezilungileyo zika-Apple.
I-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 encinci emfusa ziya kufumaneka Ukubhukisha ukusuka ngolwesiHlanu, Epreli 23, ngokufumaneka ngolwesiHlanu, Epreli 30. Abathengi banokuxhasa i-iPhone yabo ngecala elitsha lesikhumba seMagSafe ngombala ofanayo kodwa mnyama kancinci.
Kuza kubakhona i imibala emitsha yezincedisi enokuthengwa ukususela ngoku ukuya phambili. ICapri blue, ipistachio, imelon okanye iamethyst… Ngokukhawuleza nje ukuba iVenkile ye-Apple ivule kwakhona, uya kuba nethuba lokubabona bephila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ifowuni entsha ye-12 emfusa ekuthengisweni kwangaphambili ngoLwesihlanu